Thursday April 09, 2015 - 20:27:54 in Wararka by Super Admin
Ninka hooyadii dilay oo lagu magacaabo Cumar Cabdiraxmaan Faroole ayaa si ula kac ahrasaas ugu harqiyay hooyadii sida ay inoo xaqiijiyeen qaar kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Garowe oo ay odayaal kamid yihiin, waxaana haatan magaalada ka jirta xaalad kacsanaan ah.
Illaa iyo hadda lama sheegin sababta ay arrintan ku dhacday, balse waxaa la sheegayaa in wiilka xaaska aabihii Faroole dilay uu caan ku yahay af xumo, kufsiga dumarka iyo dilka dadka liita.
Xiriiro aynu la sameynay Cabdiraxmaan Faroole ayaaney inoo suura galin inaan khadka isgaarsiinta ku helno. Balse waxay arrintan imaneysaa xilli habeenkii xalay madaxtooyada magaalada Garowe ay isku aflagaadeeyeen sarkaal iyo Cabdiwali Gaas, taasoo keentay in uu Gaas sarkaalka ku dalbado ciidamo ilkahana laga daadiyo.
Dhinaca kale waxaa habeenkii xalay xabsiga magaalada Garowe ka baxsaday dad ahlu diin ah oo ay soo xireen ciidamada BIS-ta oo ay dadku u yaqaanaan (Ashahaado la dirirka) waxaana haatan maamulka Puntlan ka dhex taagan buuq arrintaasi la xiriira.
Madaxda iyo saraakiisha sarsare ee maamulka ayaa baxsashada maxaabiista ku eedeynaya Cali Nuur Xaaji oo ah taliyaha ciidanka Asluubta, inkastoo uu isaguna diidan yahay eeda loo jeediyay.
Weerar gaadiid lagu furtay maxaabiisna Kenyaan ahna lagu qabsaday oo ka dhacay gobolka Wajeer.